PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ခေါင်းဆောင်တွေ သတ္တိရှိပါ
“သမတကြီး သတ္တိမွေးပါ၊ စစ်သားတယောက်လို လက်နက်ကိုင်ပြီး အာကျယ်တဲ့သတ္တိ မလိုချင်ဘူး”
သမတ ဦးသိန်းစိန် အော်စလိုမှာ မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောတယ်။ သူ့အရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း မြန်မာ တွေနဲ့ စကားပြောတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်လည်း ပြောတယ်။ သမတနဲ့ သူတို့ မတူတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုမင်း ကိုနိုင် တို့က ပရိဿတ်နဲ့ အမေးအဖြေ လုပ်တယ်။ တိုက်ရိုက် ခံစားချက်တွေ အသံတွေနားထောင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း သူ့ရဲ့ပြည်ပ ခရီးစဉ်တိုင်း အချိန်လုပြီးတွေ့တယ်၊ မေးခွန်းတွေ ဖြေတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်ဆို ကျန်းမာရေး မ ကောင်းတဲ့ကြား၊ အိပ်ရေးပျက်ပြီး ပင်ပမ်းတဲ့ကြားက တတ်နိုင်သလောက် မြန်မာမိသားစုတွေကို လိုက်လျောတယ်။ သမတ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ ၁၀ မိနစ်နီးပါး သူပြောချင်တာ ပြောပြီး ဘာမေးခွန်းမှ မေးခွင့်မ ပေးဘဲ ထွက်သွားတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေ အလုပ်များတာ ကျနော်တို့ သဘောပေါက်တယ်။ မူလက သမတနဲ့ တွေ့ရမဲ့ အချိန်က ညနေ ၄ နာရီခွဲ။ သမတ ကို တွေ့ဖို့ မြန်မာတွေ ၁၀၀ ကျော်က ညနေ ၃ နာရီကတည်းက လုံခြုံရေးရဲ ၃ ဆင့်နဲ့ အစစ်ဆေးခံပြီး ထိုင်စောင့် နေကြတာ။
သူနဲ့တွေ့ဖို့၊ မေးခွန်းထုတ်ဖို့ နော်ဝေးနိုင်ငံမြို့ အနှံ့က မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရော ကျနော်တို့လို ရှစ်လေးလုံး ကျောင်း သားဟောင်းတွေရော လာကြတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ သမတက သတ္တိမရှိဘူး။ သမတ တင်မကဘူး သမတနဲ့ ပါလာတဲ့ ၀န်ကြီးတွေလည်း အတူတူပဲ။ သတင်းသမားတွေလည်း အတူတူပဲ။ ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက တနာရီနီးပါးကြာ သူပြောချင် ရာကို စစ်သားဘ၀တုန်းက စက်သေနတ်နဲ့
ပစ်နေသလို ဒလစပ် ပစ်နေတယ်။
အခမ်းအနားမှူးက တားတာလည်း မမှုဘူး (ဘယ်မှုမလဲ အခမ်းအနားမှူးက သူ့တို့ကို ကပ်ဖားပြီး အောက်ကြို့ဆက်ဆံ နေရတဲ့ DVB က ကိုခင်မောင်ဝင်းလေ၊ အဲဒီ သမတနဲ့ တွေ့တဲ့ အခန်းမှာပဲ တချိန်တုံးက NCGUB ညွန့်ပေါင်း အစိုးရခေါင်း ဆောင်တွေ၊ NCUB အဖွဲ့တို့နဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ တိုက်ကြမဟဲ့ ဆိုပြီး ပါးစပ်ကအမြှုတ်ထွက်အောင် ပြောဟောခဲ့တာကို ကိုခင်မောင်ဝင်း ကိုယ်တိုင် Video ရိုက် အင်တာဗျူးလုပ် ၀ါဒဖြန့်ခဲ့သေးတယ်။ ပုလင်းတူဘူးဆို့ခဲ့ကြ သေးတယ်- စကားချပ်)
၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း အာတာကို နားထောင်နေရတဲ့ ပရိဿတ်က စိတ်ပျက်နေပြီ။ မျက်နှာတွေ ရှုံ့နေပြီ။ ဘယ့်နှယ် အစိုးရ ကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ လာတာ သူတို့ တရားဟောတာ နားထောင်ဖို့ လာတာ ကျနေတာပဲတဲ့။ ပွစိပွစိပြောကုန်ပြီ။ ဒီတော့ အများပြည်သူအသံကို အမြဲ ဂရုစိုက် လေးစားတဲ့အနေနဲ့ သတင်းထောက် ကျနော်လည်း အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ထပြော လိုက်တယ် …
“၀န်ကြီး.. သိပ်ပွားတယ်” လို့
သူက “ဗျာ.. ဘာပြောတယ်”
သူမရှင်းလို့ ကျနော် လက်ဟန်နဲ့ပါ ရှင်းအောင်ပြောတယ်။ ဘယ်လက် ချောင်းတွေကို စုလိုက် ကျဲလိုက် (ပွစိပွစိ လက်ဟန်) လုပ်ပြပြီး
“၀န်ကြီး သိပ်ပွားတယ်လို့ ပြောတာပါ။ မေးခွန်း မေးမဲ့လူတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်” လို့ ပြောတော့
မျက်နှာပျက်ပြီး “မေးကြပါ၊ ကျနော် ညနေအထိ ထိုင်စောင့်မယ်” လို့ ပြန်ပြောတယ်။ တကယ်တော့ အခန်းဌားတာ ၆ နာရီဆို အချိန်ပြည့်ပြီ။ တကယ့် အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေ မမေးလိုက်ရဘူး။ လူတော်တော်များများ မကြေမနပ်။ အား လုံးက သဘောပေါက်တယ်။ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ အချိန်ကုန်အောင် အာသွားတယ် ဆိုတာ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင် လုပ်နေသူတွေက သတ္တိမရှိဘူး။
ပြည်သူတွေက မအူပင် မလက်တိုကျေးရွာ က လယ်သမားတွေ အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခံရတာ၊ သွေးထွက်သံယို ဖြစ် နေတာကို သမတ သိအောင် ပြောပြချင်တယ်။ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ် သတင်း ထုတ်ပြန်တာ ကြားချင် တယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေ မေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေးခွင့်မ ရကြဘူး။ တာဝန်ရှိသူတွေ သတ္တိမရှိဘူး။ အချိန်အကန့် အသတ်၊ မေးခွန်း အကန့်အသတ်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ သုတ်သုတ် လစ်သွားတယ်။ သူတို့လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ သမတ ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါလာတဲ့ မီဒီယာတွေရောပဲ။ သမတ ကို ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြတာကို စကိုင်းနက်၊ MRTV နဲ့ ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီး သတင်းအဖွဲ့တွေက ဓာတ်ပုံရော၊ ဗွီဒီယိုရော၊ အင်တာဗျူး တွေရော လုပ်တယ်။ သမတနဲ့ မြန်မာတွေ တွေ့ဆုံ ပွဲကိုလည်း အင်တာဗျူးတွေ လုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လွှင့်တာတော့ မှုတ်ဘူး။ “ကျနော်တို့ လူကြီးတွေ သဘောအတိုင်းပဲ လုပ် ရတာပါ၊ အကိုတို့ သတင်းတွေ မလွှင့်ဖြစ်ပါဘူး၊ မှတ်တမ်း အနေနဲ့ ယူထားတာပါ” လို့ ကျနော့်ကို သူတို့ မီဒီယာအဖွဲ့ဝင် တယောက်က ပြောတယ်။ တကယ်တော့ သမတကို ဆန္ဒပြ သတင်းတွေ၊ အစိုးရအပေါ် အမြင် သဘောထားတွေကို မီဒီ ယာတွေကတဆင့် အစိုးရရော ပြည်သူတွေကိုပါ အသိပေးဖို့လိုတယ်။ အခုတော့ တဖက်လှည့် အင်တာဗျူးလုပ်၊ နား လှည့်ပါးလှည့်နဲ့ သတင်းဌာနအမည်ခံပြီး အဲဒီသတင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပြည်သူတွေကိုအသိ မပေးရဲတာဟာ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်။ အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်သတင်းဌာနတွေမို့ သတင်းမှန်ကို ပြည်သူတွေဆီပေးရဲမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ရီစရာတခု ပြောရမယ်။ ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း အမေးအဖြေ အစီအစဉ်တွေပြီး သွားတော့ လူတော်တော်များများ ပြန်သွားတဲ့ အချိန် ၀န်ကြီးက သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ သတင်း မီဒီယာတွေကို “မင်းတို့ သေချာ တည်းဖြတ်ပြီးမှ လွှင့်နော်၊ ပြောတာတွေ အ ကုန်မထည့်နဲ့၊ အကုန် ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်” ဆိုပြီးပြောတာ ကျနော့ နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကိုကြားခဲ့ရတာ။ အနားမှာရှိနေတဲ့ ကျနော်ကတောင် “ကျနော်က တည်းဖြတ်ပြီး လုပ်ရမှာလား” လို့ လှမ်းမေးလိုက်တော့ ၀န်ကြီးက မျက်နှာ တည်တည်နဲ့ “ကျနော် သူတို့ကို ပြောနေတာပါ” လို့ ပြန်ပြောတယ်။
ဒါဆို ရှင်းနေတာပဲ။ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေဟာ သတင်းကို သတင်းအတိုင်း အစိုးရဘက်ကို မလိုက်ဘဲ တိတိကျကျ မှန် မှန်ကန်ကန် လုပ်ရဲသလား၊ မလုပ်ရဲဘူးလား၊ အဖြေက ရှင်းတယ်။ အစိုးရက သတင်းမီဒီယာတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြသတင်းလည်း သူတို့ မကောင်းတာ ၀ါဒဖြန့်ချင်ရင် ထုတ်သုံးလိမ့်မယ်။ နိုင်ရင်ဖိထောင်းလိမ့်မယ်။
ဆန္ဒပြတုန်းက သူတို့မီဒီယာတွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတခုကို ကျနော်ဖြေနေရင်း ထည့်ပြောလိုက်တာ တခုရှိတယ် …
“ပြည်သူတွေရပိုင်ခွင့်က တကျပ်ဖိုးဆို တကျပ်ဖိုးပေးပါ။ တမတ်ဖိုး၊ ပေးလိုက် ငါးမူးဖိုးပေးလိုက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ပြန်ပေး မဆွဲထားနဲ့၊ ရေကူးတတ်ချင်တဲ့လူကို ရေနစ်မှာစိုးလို့ ရေထဲမဆင်းခိုင်းရင် ရေကူးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ လုပ်မယ်ဆို သတ္တိရှိရှိလုပ်ပါ ကျနော်တို့ အားပေးမယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။
တကယ်ဆို ကျနော်တို့ မြန်မာလူထုဟာ မရိုင်းဘူး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်သာကျင့်သုံးခွင့်မရတာ ဘာကိုမလုပ်သင့်ဘူး၊ ဘာကို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ခွဲခြားသိတယ်။ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေမှာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ထုံးတွေပါပြီးသား။ အစိုးရသာ ဒီမိုကရေစီ တန်ဘိုးကို နားမလည်သေးတာ ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကို သဘောပေါက်ပြီးသား။ ကျနော် တို့ ပြည်သူက မ “အ” ဘူး။ အစိုးရက “အ” နေတာ။
ကျနော်တို့ပြည်သူက ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်စလျှောက်နေပြီ။ နောက်ပြန်လျှောက်မှာမှုတ်ဘူး၊ ခေတ်ပြောင်းပြီဆိုတာနဲ့ မိမိတို့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို သတ္တိရှိရှိလုပ်နေကြတယ်။ အစိုးရကပြောပြီး တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြန် ရောက်နိုင်တယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်နေပြန်တယ်။ ဘာမှ သတ္တိရှိရှိ မလုပ်ရဲဘူး။ အကြောက်တရားလွမ်းမိုးတုန်း၊ လူထုနဲ့ အ တိုက်အခံကို မယုံကြည်တုန်း။ ဒီပုံစံနဲ့ မိုးကြီးချုပ်လိမ့်မယ် သမတကြီး။ ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ခရိုနီတွေပဲ အလုပ်ဖြစ်သွားမှာ။
သမတကြီးလည်နေတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက သိပ်လည်တယ်။ သမတကြီးကအခုမှ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံရောက်တာ သူတို့က တကမ္ဘာလုံးက ပထ၀ီမြေပုံတွေကို အပ်ကြောင်းထပ်နေအောင် လိုက်ကြည့်ပြီးပြီ။ သူတို့လိုချင်တာ သူတို့ ပြည်သူတွေ ကိစ္စက ပထမတန်းပဲ။ ကျနော်တို့ သမတကြီးက ဘယ်သူ့အတွက် ပထမတန်းဦးစားပေးမလဲ?
သမတကြီးရဲ့ပါတီအတွက်လား? သမတကြီးရဲ့အစိုးရအတွက်လား? သမတကြီးရဲ့ တပ်မှုးတွေအတွက်လား? ဒါမှမ ဟုတ် မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လား? မြန်မာ ပြည်သူတွေအတွက် သက်သက်လုပ်မယ်ဆို သမတကြီး သတ္တိရှိဖို့လိုတယ်။ သမတကြီး သတ္တိမွေးပါ။ စစ်သားတယောက်လို လက်နက်ကိုင်ပြီး အာကျယ်တဲ့ သတ္တိ မလိုချင်ဘူး။ ပြည်သူတွေက အဲဒီ အာဏာရှင်စိတ်နဲ့ အာကျယ်တွေကို အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ သတ္တိမျိုးပဲ သမတကြီးမှာဆီမှာ မြင်ချင်ကြတယ်။ ဒီတော့ သမတကြီးသတ္တိရှိပါ။ ၀န်ကြီးတွေ သတ္တိရှိပါ။ လွှတ်တော်လည်းသတ္တိရှိပါ။ ဒီမိုကရေစီကို မ ရှောင်ပါနဲ့ ၊ ပြည်သူတွေကို မကြောက်ပါနဲ့။ အစိုးရက သတ္တိရှိရှိ ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုချဲ့ထွင်ပါ။ တိုးလျှောက်ပါ။ ခေါင်းဆောင်တွေ သတ္တိရှိပါ။